कलेज छान्ने आधारहरू | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा कलेज छान्ने आधारहरू
शिक्षा 57 views
एमबीए उत्तीर्ण विद्यार्थी बिजनेश एड्मिनिष्ट्रेशनमा मास्टर्स अर्थात् सिद्ध जनशक्ति हो । यसको मतलव कलेजबाट बिदा भएको दिन ऊ व्यवसाय वा व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएको हुनुपर्छ । के हाम्रो वरपर रहेका एमबीए कलेजहरूले त्यो क्षमताको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् त ? एकपटक नियालेर हेरौं ।
एमबीएको शिक्षण पाठ्यपुस्तक पढेको भरमा पूरा हुने विषय होइन । यसको शिक्षण विद्यार्थीलाई रियल टाइम बिजनेश (वास्तविक व्यवसाय) गर्न सक्ने बनाउनेगरी हुनुपर्छ । वास्तविक बिजनेशमा आवश्यक पक्षहरू विचार गर्दा, एउटा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले कन्सेप्ट (अवधारणा) हुनुपर्छ । त्यसपछि त्यसलाई स्थापित गर्न लगानी, त्यसबाट हुने उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ अथवा सामग्रीको व्यवस्थापन, गुणस्तर कायम गर्दै उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण (मार्केटिङ), त्यसबाट आउने आम्दानी र त्यसबाट खर्च कटाएर पुनः व्यवसायको निरन्तरता, विस्तार, मुनाफा आर्जन जस्ता पक्ष रियल टाइम बिजनेशमा पर्दछन् । उल्लिखित चरण पार गर्दै व्यवसाय हाँक्न सक्षम बनाउने किसिमका पूर्वाधार तपाईं भर्ना हुन चाहेको कलेजमा छन् त ? खोजिनिती गर्नुहोस् । के कस्ता पूर्वाधार भएका कलेजले आफूलाई व्यवसाय हाँक्न योग्य बनाउँछन्, यो तपाईंको चासोको विषय हुनुपर्छ ।
एमबीएको कलेजका सामान्य सुविधा
व्यवस्थापनको परम्परागत शिक्षा, एमबीएसले समयसापेक्ष र व्यावसायिक क्षमता भएका जनशक्ति उत्पादन गरेन भन्ने निर्क्योलसँगै एमबीएको शिक्षण शुरू भएको हो ।
यसअनुसार एमबीए पढाउने सबै कलेजले व्यावसायिक क्षेत्रका अनुभव सुनाउन, सम्बन्धित व्यवसायका अवसर र चुनौती बुझाउन ‘गेष्ट लेक्चर’को व्यवस्था गर्छन् । विभिन्न व्यवसायका व्यवसायी तथा व्यवस्थापकलाई ‘गेष्ट लेक्चरर’का रूपमा निम्त्याएर दिइने यस्ता कक्षाले विद्यार्थीलाई व्यावसायिक क्षेत्रका रियल टाइम अवस्था बुझ्न केही मात्रामा सहयोग पुग्छ । यस्ता कक्षामा ल्याइने लेक्चररको विषय विज्ञता तथा विविधता अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।
भविष्यमा पढाइ सकेर बजारमा निस्किएपछि गर्नुपर्ने काम पढाइ अवधिमै सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थामा गएर केही समय गर्नु इण्टर्नशिप हो । यसमा बैङ्क, वित्तीय संस्था, उद्योगलगायतको अफिसभित्र तथा बाहिर (मार्केटमा) गएर गर्ने काम पर्दछन् । यसले भोलिका दिनमा आफूले गर्नुपर्ने कामको प्रकृति, प्रणाली तथा तरीकाबारे सामान्य ज्ञान हासिल हुन्छ ।
एमबीए कलेजहरूले विद्यार्थीलाई व्यवसायको बारेमा जानकारी दिलाउन सम्बन्धित विभिन्न संस्था तथा उद्योगहरूको भ्रमण पनि गराउँछन् । यी एमबीए कलेजका विशेषता हुन् ।
गुणस्तरीय एमबीएका आधारहरू:
इभेण्ट म्यानेजमेण्ट र विद्यार्थीको भूमिका
एउटा गुणस्तरीय एमबीए कलेजले वर्षभरिमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम (इभेण्ट) सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यति मात्र नभई यस्ता कार्यक्रम विद्यार्थीद्वारा नै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइनुपर्छ । साथै, विभिन्न विद्यार्थी क्लबबीच इभेण्ट म्यानेजमेण्टका प्रतिस्पर्धासमेत सञ्चालन गरी भविष्यमा गर्नुपर्ने कामका लागि अहिल्यै प्रयोगात्मक शीप विकासको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।
एमबीए कलेजका प्रोफेसर आ–आफ्नो विषयका विज्ञ हुन्छन् । यसले गर्दा आफ्नो संस्थामा आइपरेको व्यवस्थापकीय तथा अन्य जटिल समस्याको समाधान पत्ता लगाइदिन संस्थाले सम्बन्धित कलेज वा प्रोफेसरसँग कन्सल्ट्यान्सी सेवाको माग गर्दछन् । कलेजले प्रोफेसरसँगै विद्यार्थी सम्मिलित समूह निर्माण गरी सो समस्याको पहिचान तथा हलका वैकल्पिक उपाय पत्ता लगाउने काम गर्छ र सम्बन्धित संस्थालाई बुझाउँछ । यस्ता कार्यमा विद्यार्थीको सहभागिताले भविष्यको लागि उनीहरूलाई तयार पार्दछ ।
आन्त्रप्रेनरशिप डेभलपमेण्ट प्रोग्राम
एमबीए विषय रोज्ने विद्यार्थीमध्ये धेरैको आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना पनि हुन्छ । यसले गर्दा उनीहरूलाई आन्त्रप्रेनरशिप डेभलपमेण्ट (उद्यमशीलता विकास) महत्त्वपूर्ण विषय हो । कुनै उत्पादनको उद्यमी बन्न आवश्यक प्रस्तावना लेखन, उद्देश्य निर्धारण, व्यवसाय स्थापनको प्रक्रिया, सहयोगी पक्षहरू, व्यवस्थापकीय शीप, स्पष्ट तथा प्रभावकारी सञ्चार क्षमता, नीतिगत व्यवस्थाको ज्ञान, कर्मचारीसँगको व्यवहारलगायत पक्षको सिकाइ यसअन्तर्गत गरिन्छ । यसका लागि उल्लिखत र अन्य विविध विधि प्रभावकारी रूपमा अपनाइन्छ ।
यो पनि आन्त्रप्रेनरशिप डेभलपमेण्ट प्रोग्राम जस्तै हो । तर, यसको काम झन् बढी प्रभावकारी हुन्छ । इन्क्युबेशन सेण्टर सबै कलेजले राखेका हुँदैनन् वा एकदमै थोरै कलेजमा मात्रै छन् । यसो हुनुका कारण यसमा लाग्ने लगानी तथा श्रमलगायत विषय हुन् । इन्क्युबेशन सेण्टर हुने कलेजले विद्यार्थीले भविष्यमा कलेजबाट गइसकेपछि गर्ने व्यवसायको शुरुआत गराएर मात्रै विद्यार्थीलाई कलेजबाट बिदा गर्छ । अर्थात् व्यवसायको स्थापना गर्नेसम्मको सारा काम पढ्दैको समयमा सकेर अब निरन्तर रूपमा सञ्चालन मात्र गरे पुग्ने अवस्थाको व्यवसाय आफूसँग लिएर विद्यार्थी कलेजबाट बाहिरिन्छ ।
जब प्लेसमेण्ट सेल
आजभोलि एमबीए कलेजले जब प्लेसमेण्ट सेल अर्थात् आफ्नोमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई रोजगारी दिलाउने एकाइ स्थापना गर्नु सामान्य जस्तै हुन थालेको छ । त्यसैले, यो एकाइ भएका कलेजमा पनि यसले गर्ने कार्यलाई राम्ररी केलाएर हेर्नु पर्छ । यस्ता एकाइले बेला बेलामा विभिन्न उद्योग तथा संस्थासँगको सहकार्यमा रोजगारी मेला सञ्चालन, त्यस्ता उद्योग तथा संस्थासँगको नियमित सम्पर्कमा रही त्यहाँ आवश्यक जनशक्तिको जानकारी प्राप्त गर्ने तथा आफ्नोमा रहेका विद्यार्थीको जानकारी उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्दछ । त्यति मात्र नभई आफ्नो कलेजका पास–आउट कहाँ–कहाँ पुगेर के के काम गर्दै छन् भन्ने अद्यावधिक तथ्याङ्क (ट्रेसर सर्भे) पनि यस्ता एकाइसँग हुनुपर्छ । साथै, आफ्ना पास–आउटहरूले गरेको पहिलो रोजगारीमा पाएको तलब कति–कति छ, त्यसको जानकारी दिन सक्ने कलेज उपयुक्त हुन्छ ।
कलेजका मिशन, भिजन तथा गोल/अब्जेक्टिभमा उल्लिखित अभिव्यक्ति एमबीए सञ्चालन गर्ने कलेजसँग कत्तिको सुहाउँदो छ र उक्त कलेजको माथिल्लोदेखि तल्लो तहले त्यसको पालना गरेको छ/छैन, सम्बन्धित कलेज कुन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पर्दछ, बुझ्नुहोस् । किनकि, हरेक विश्वविद्यालयको आफ्नै दृष्टिकोणअनुसार शिक्षण विधि हुन्छ । अहिलेका कतिपय कलेजले उद्यमी मात्र उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ पढाइरहेका छन् भने कतिपयले कुशल व्यवस्थापक उत्पादन गर्ने भनेर पढाइरहेका छन् । त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘जर्नल’ पनि हो । कुनै पनि कलेजको गुणस्तर जाँच्ने एक प्रमुख आधारमा उसको जर्नललाई लिने गरिन्छ । जर्नल भनेको सामान्य वार्षिक अङ्क वा सामान्य जानकारी मात्रै दिने पुस्तक निकाल्नु जस्तो सजिलो कुरा होइन । गहिरा अनुसन्धान तथा केस स्टडीसहित प्रयोग गरी तथ्याङ्क र विश्लेषणमा आधारित विषयगत ज्ञानका लागि निकै महत्त्वपूर्ण प्रकाशन जर्नल हो । त्यसैले, कुनै कलेजको आफ्नो जर्नल हुनु भनेको सोहीअनुरूपको विज्ञ जनशक्ति सो कलेजमा छन् भन्ने देखिनु हो ।
समायोजन गरिँदै फलेवासका १२ विद्यालय
७ असार २०७५, बिहीबार १०:०३